Author Topic: Su'aal: Waxaa dhuunta ilaa qoorta iiga yaal buur buur? (Read 10714 times)
« on: February 20, 2016, 07:11:28 PM »
asc dr alle ha ku ciseeyo
muddo 10 sano waxa dhuunta ilaa qoorta iiga yaal buur buur qaar waan iska qalay qaarna wali waa igu yaalllan waa qanjirro dhagaha hoostoda ,dhuunta , qanjirada iyo dhamn inta u dhexaysa iguma hayaan xanuun mar dhif ah maahane waxan qaatay dawo badan antibiotics ilaa marki danbe dhakhtar ii qoray dawo TB dhaman kuma fiicnaan
dr talo cafimad jazakalah
Re: Su'aal: Waxaa dhuunta ilaa qoorta iiga yaal buur buur?
« Reply #1 on: February 28, 2016, 01:40:51 PM »
Xikmaawi, qanjir barary xalkiisu qalliin ma ahan, waan in la ogaadaa waxa barariyay, maxaa yeelay qanjirku hadduu bararo wuxuu astaan u yahay inuu jirka jiran yahay, wuxuu noqon karaa infekshan kaasoo dhowr nuuc oo kala duwan noqon karo wuxuu noqon karaa cillad qanjirrada haysato sida kansar iyo wax la mid ah, marka waxaa la sameeyaa in qanjirka cad laga jaro oo baaritaan loo dir ama dheecaan laga qaado hadduu dheecaan leeyahay.
Laakiin haddii aad qashid, kuwa kale way sii bararayaan, haddii aad iska wada bixisidne wax cilalda ku haysato kaa difaacayo ma jiraan.
Fadlan arrintaan ha sahlanin.
Views: 12487 December 04, 2016, 10:32:07 PM
Views: 9088 July 05, 2017, 01:34:23 PM
Views: 55151 December 05, 2015, 11:34:53 AM
Views: 10626 November 01, 2011, 07:58:14 PM
Started by DargaayBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 9682 April 14, 2011, 07:15:58 PM